Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: January 2010
နယ်စပ်ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကားကို တောင်ကားရိုလိုင်နားရှိ South Aieken High School မှာပြသမည်
Film screening will show issues of Burma area
Students Taking Action Now for Darfur (STAND) လို.ခေါ်တဲ့ ဒါဖော်အတွက်ချက်ချင်းအရေးယူတဲ့ကျောင်းသားအဖွဲ.သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်တုန်းကစတင်ခဲ့သည်၊အရင်တုန်းကဆို ဒါဖော်အရေးကိုကမ္ဘာသိအောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီ တစ်ခါကျတော့ဗမာပြည်အရေးကိုထူးထူးခြားခြားလုပ်ဆောင်နေတယ်လို. STAND အဖွဲ.ဝင်ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ပြောပြသည်၊(Border Story=နယ်စပ်ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင်ဖန်းတီးထုတ်လုပ်သူသည် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ သာသနာပြုကလေးဘဝ ဖြင့်ကြီးထားလာသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်၊
ရုပ်ရှင်ဖန်းတီးထုတ်လုပ်သူ JOE Ilift ဟာထိုင်းနှင့်မြန်မာနယ်စပ်နှစ်ဘက်မှာတိတ်တဆိတ်ဖြစ်ပေါ်နေသောအကြပ်အတည် ကိုပြောပြပြီး ရုပ်ရှင်ဟာ ဗမာစစ်အစိုးရရဲ.အကြမ်းဖက်ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှုဒဏ်ကြောင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဘဝရောက်သွားသောတိုင်း ရင်းသားလူမျိုးများ၏ဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့်စိန်ခေါ်ရင်ဆိုင်နေရခြင်းကိုပြသထားပါသည်၊ထို.လူမျိုးများသည် သူတို.ရပ်ရွာကနေ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခါ ပြည်တွင်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့သူများလို.သတ်မှတ်ခံရပြီး ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုကူးပြောင်းရောက်လာတဲ့ အခါသူတို.က ဒုက္ခသည်များအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်၊ရုပ်ရှင်ကားသည် ပြည်တွင်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့သူများ၏ဘဝနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံရှိဒု က္ခသည်များ၏ဘဝရော၊သူတို.တတွေအကြပ်အတည်ရုန်းကန်နေ၇တဲ့ဘဝတွေကိုသိသာမြင်သာရိုက်ထားပါသည်၊
“ဤရုပ်ရှင်ကားဟာဗမာပြည်အရေးကိုတင်ပြတဲ့နေရာမှာ ကောင်းသောရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်သည်၊(ဗမာပြည်)ဟာတကယ် ရက်စက်လွန်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည် ဟု စတန်အဖွဲ.ဝင်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကပြောပြသည်၊
“ နယ်စပ်ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကား” ကို ဒီနေ. ၃ နာရီဆိုကျောင်းသားစုရုံးပြင်မှာပြသမည်ဖြစ်ပြီးအခမဲ့ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်၊
ရုပ်ရှင်ကားအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး e-mail sshipes@aiken.k12.sc.us. နှင့် Contact Rachel Johnson at rjohnson@aikenstandard.com.တို.ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်နိုင်ပါသည်၊
South Aiken High School students are taking action and spreading the word about international challenges.
Two years ago, students at SAHS startedachapter of Students Taking Action Now for Darfur (STAND). Since that time, students have been takingastand about issues faced not only in Darfur but also around the world.
"Our goal is to spread awareness about Darfur, but this time we are doing something different with Burma," said Nate Foutch, STAND member. "The filmmaker grew up asamissionary kid in Thailand."
SAHS STAND will show "Border Story" today in the school auditorium at 3:30 p.m. Admission to the event is free of charge.
"Border Story," created by student filmmaker Joel Iliff, "tells the story ofasilent crisis on both sides of the border," according to press materials. The film follows the challenges faced by ethnic minorities in Burma caused by being displaced from their homes by the violence of the country's ruling military regime.
"When people are forced to flee from their villages, they become known as 'internally displaced people (IDP).' It is not until they cross an international border that they then become 'refugees,'" states press materials. "'Border Story' takes an unflinching look into the lives of both IDPs inside Burma, refugees in neighboring Thailand and effectively documents the hardships they endure."
"It is supposed to beagood movie that shares the issues of Burma. It isareally repressed country," said Aaron Hodgkins, SAHS student.
The film showcases Burma's mountainous scenery and includes interviews with activists and victims to presentahuman drama. For more information about STAND or the film, e-mail sshipes@aiken.k12.sc.us.
Contact Rachel Johnson at rjohnson@aikenstandard.com.
ISIS ခေါ်သိပ္ပံနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဌာနမှထုတ်ဝေသော (Burma: A Nuclear Wannabe; Suspicious Links to North Korea; High-Tech Procurements and Enigmatic Facilities=နယူကလီးယားနိုင်ငံဖြစ်ချင်တဲ့ဗမာပြည်၊မြောက်ကိုးရီးယားနှင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်ဆက်စပ်ခြင်း၊
ဗမာပြည်လျှိ.ဝှက်နယူကလီးယားနေရာများကိုရှာဖွေခြင်းအစီရင်ခံစာတစ်စောင်နှင့်(Deep Connections between Myanmar’s Department of Atomic Energy and the DTVE=မြန်မာအနုမြူစွမ်းအင်းဌာနနှင့်စက်မှုသိပ္ပံနှင့်အလွတ်ပ ညာသင်ကျောင်းဌာနတို.အကြီးအကျယ်ပတ်သက်ဆက်နွှဲနေခြင်းအစီရင်ခံစာတစ်စောင်၊တို.ထောက်ရှူရင်သံသယမဟုတ်၊ တကယ်လုပ်နေသည်၊သို.သော်၊အောင်မြင်မှုမရှိသေးတာပဲရှိတယ် ဟုဆိုနိုင်သည်၊
Myanmar DAE DTVE 28 January 2010
KNU Pre Speech on 61st Karen Revolution Day
KYO Felicitation Letter of _61th _ KRD_Burma_ -
KCM ကရင်ကွန်မြူနီတီ မီနီဆိုးတားမှ (၆၁)ကြိမ်မြောက် ကရင့်တော်လှန်ရေးနေ့အတွက် ပေးပို့သည့် သ၀ဏ်လွာ
သူရဲကောင်းပီသသော ကရင်အမျိုးသမီး။ ကရင်အမျိုးအပေါင်းတို့-
သူရဲကောင်းပီသသော ကရင်အမျိုသား လက်နက်ကိုင်တပ်ပေါင်းစုံမှ ရဲဘော် ရဲမေအပေါင်းတို့-
အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး။ တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရရှိရေး။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး။ ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးတို့အတွက် တရားတဲ့ ခုခံတော်လှန်စစ် ဆင်နွဲတာ(၆၁) နှစ် ပြည့်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။ ဒီနှစ်ပေါင်း (၆၁)နှစ်ကြာ ကာလများအတွင်း တန်ဘိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ကရင့်အာဇာနည်သူရဲကောင်း အထောင်အသောင်းရဲ့ ဝိဥာဉ်တွေ ပေးဆပ်စွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်၊
ကရင့်အာဇာနည် သူရဲကောင်းအထောင်အသောင်းဟာ ကရင့်သမိုင်း စာမျက်နှာသစ်ကို သူတို့ရဲ့ သွေးနီတွေနဲ့ ရေးထိုးခဲ့တယ်၊ ဒီသမိုင်း စာမျက်နှာသစ်ဆိုတာ “ကရင် ဟာ လွတ်လပ်ရေး။ တရားမျှတရေး။ ဥပဒေစိုးမိုးရေး။ တန်းတူရေး။လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အဝရရှိရေးနဲ့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွဲရာမှာ လက်မမြောက်။
ဒူးမထောက်။ အညံ့မခံ အရှုံးမပေးတဲ့။ အောင်ပွဲယူရဲတဲ့ သူရဲကောင်း ပီသတဲ့ လူမျိုးဖြစ်တယ်”ဆိုတာ မြန်မာနဲ့ ကမ္ဘာကို သက်သေပြလိုက်တာ ဖြစ်တယ်၊ (၆၁)နှစ်ကြာ ခုခံတော်လှန်စစ် ဆင်နွဲရာမှာ ကရင်တမျိုးသားလုံးဟာ (KNU)ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးရဲ့ တောက်ပြောင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုကို တစိုက်မှတ်မှတ် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်၊အမျိုးသား ခေါင်း ဆောင်ကြီးများ ဖြစ်ကြတဲ့ စောဘဦးကြီး၊စောစိုင်းကေ၊မန်းဘဇန်၊စောဗိုလ်မြ၊စောဘသင်တို့ကို သစ္စာစောင့်သိရိုသေကြသလို ကျဆုံးလေပြီးဖြစ်တဲ့ ကရင့်အာဇာနည် အထောင်အသောင်းအပေါ် သစ္စာစာင့်သိရိုသေကြတယ်၊ကရင်တမျိုးသားလုံးဟာ (KNU)ကို ဝိုင်းရံသွားမှာ ဖြစ်သလို ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး လက်နက် ကိုင်တပ် ပေါင်းစုံ (KNLAF) (Karen National Liberation Armed Forces)ကို ဘက်ပေါင်းစုံက ကူညီ ထောက်ပံ့သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ကရင်တမျိုးသားလုံးဟာ ကရင့်လွတ်လပ်ရေး အတွက် ဘယ်လို ပေးဆပ်ရမှုမျိုးကိုမဆို ပေးဆပ်ရန်အသင့် ရှိနေပါတယ်၊
သူရဲကောင်းပီသတဲ့ ကရင်အမျိုးသမီး အမျိုးသားအပေါင်းတို့-
သူရဲကောင်းပီသတဲ့ ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်ပေါင်းစုံက ရဲဘော်/ရဲမေအပေါင်းတို့-
စစ်ရာဇာဝတ်ဂိုဏ်း (နအဖ)ဟာ သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ရာဇာဝတ်မှုများကြောင့် စစ်ခုံရုံးမှာ ကျိုးစင်တက်ရမှာကို ကြောက်လန့်နေကြလို့ ဘယ်တော့မှ လူမျိုးစုံ ပြည်သူတွေကို အာဏာလွဲပေးမှာ မဟုတ်ဘဲ။ ကျားကုတ်ကျားခဲ အာဏာကို ဖက်တွယ်ထားမှာ ဖြစ်တယ်၊ ကရင့်တော်လှန်ရေးကို ပိုမိုကြမ်းကြုတ်စွာ ဖြိုခွဲလာမှာ ဖြစ်တယ်။ထိုးစစ်ကြီးများ ဒီနွေရာသီမှာ ဆင်နွဲလာနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာတဝှန်းမှ ကရင်များ လှည်းနေ၊လှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် ကရင့်ခုခံတော်လှန်စစ်ကို ကာကွယ်ဘို့ (KNU) ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးရဲ့ ခေါင်းဆောင် မှုကို အပြည့်အဝခံယူပြီး (KNLAF)ကရင်အမျိုးသား လက်နက်ကိုင်တပ် ပေါင်းစုံနဲ့ ခိုင်မာစွာလက်တွဲပြီး ကရင့် လွတ်လပ်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်သွားကြမယ်၊ ကရင့်ခုခံတော်လှန်စစ်ကို နောက်ဆုံးအောင်ပွဲရတဲ့ အထိ တိုက်ပွဲဝင်ရာမှာအမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး စောဘဦးကြီးရဲ့ (မူ)လေးချက်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ကိုင်စွဲသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ဂတိသစ္စာပြု လိုက်ပါတယ်၊
ကရင့်ခုခံတော်လှန်စစ်ပွဲ မုချအောင်ပွဲဆင်နွဲရမှာ ဖြစ်တယ်၊
(နအဖ)စစ်ရာဇဝတ်ကောင်များ မုချကျိုးစင်တက်ရမှာ ဖြစ်တယ်၊
Condem SPDC on Assassinated Mogla GS
“သျှမ်းပြည်သားအချင်းချင်း တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်နေမယ်ဆိုရင် စစ်အာဏာရှင်အတွက်ဘဲ အထောက်အကူ ဖြစ်မယ်။ ၂၀၀၁-၂၀၀၂ နဲ့ ၂၀၀၅ တုန်းက နအဖ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုကြောင့် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် လွယ်တိုင်း လျဲန်း ဌာနချုပ်ကို ၀ တပ်ဖွဲ့က တက်တိုက်ခဲ့တယ်။ PSLF အနေနဲ့ သျှမ်းပြည်သားအချင်းချင်း မတိုက်ခိုက်ကြဖို့ တတ်အားသမျှကြားဝင် ပေးသေးတယ်။ မရဘူး။ အခုလဲ နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်မပြောင်းမချင်း ၀ ကို နအဖ က သပ်လျှိုဖြိုခွဲ နေမှာဘဲ” - ဟု ဆက်ပြောပါသည်။
အင်းအားနဲတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အုပ်စုတစ်ချို.လက်နက်အင်းအား ဆုံးရှုံးမည်၊ခေါင်းဆောင်ပိုင်များကျတော့အမှုကွက်ဆင်ခံရပြီးထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရနိုင်သည်၊လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုခံရနိုင်သည်၊ ရွေးကောက်ပွဲမဝင်၊အရောင်မပြောင်း၊အသွင်းမပြောင်းတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်းအားစုများအတွက်တော့၊ထိုးစစ်ခံရ နိုင်သည်၊ထိုးစစ်ဆင်မည့်တပ်အင်းအားဟာရွေးကောက်ပွဲဝင်(သို.)နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်းပြောင်းသွားသောတိုင်းရင်းသား
လက်နက်ကိုင်တပ်အင်းအားများကိုရှေ.တန်တင်သုံးမည်၊တိုင်းရင်းသားတပ်အချင်းချင်းရန်တိုက်ပေးတဲ့သဘောဖြစ်သည်၊တိုင်း ရင်းသားခေါင်းဆောင်များသည် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုများနှင့်အချင်းချင်းကွဲပြဲမှုများ ဒဏ်နဲ.အကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်ရမည်၊ဒါပေမဲ့၊ထိုးစစ်ပွဲများပြင်းထန်လာတဲ့အခါ ပြည်တွင်းမှာရပ်တည်နေသောတိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်အခြားသောအမျိုးသားနိုင်ငံရေးပါတီများကဖိနှိပ်မှုဒဏ်များမှသက်သာခွင့်ရမည်၊အနေချောင်လာမည်၊ပြ ည်သူလူထုနှင့်တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စစ်သားများအားကိုးရာအင်းအားစုတစ်ရပ်ပေါ်လာမည်၊တဖန်တင်းမာမှုများဖြစ်လာနိုင်ပြီးစစ် တပ်အာဏာသိမ်းပွဲတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မလား၊ပြည်သူလူထုနှင့်တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စစ်သားခေါင်းဆောင်များပူးပေါင်းပြီး အောင်ပွဲခံမလားဆိုတာကိုအချိန်ကသာအဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်လိမ္မည်၊
မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးမင်းအိမ် ယနေ့ မနက်ပိုင်း ၈း၃၀ ခန့်တွင် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံ ရသည် ဟု ထိုင်းနှင့် တရုတ်နယ်စပ် သတင်းရပ်ကွက်များ ကပြောပါသည်။
“အခုက ကားတွေ ခရီးတင်ကားတွေ မိုင်းလားနယ်မြေတွေကနေ အပြင်ထွက်ခွင့်မရတော့ဘူး၊ ကျိုင်းတုံ ကနေ၀င်လာရင် တော့ရတယ်။ လူထု လဲ အိမ်ပြင်မထွက်ဖို့ မိုင်းလားအာဏာပိုင်တွေက အမိန့်ထုတ်ထားတယ်”- အမည်မဖေါ်လိုသူတဦး က ပြောပါသည်။
NDAA-ESS မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့ ဒုဥက္ကဌ ခွန်ဆန်လူ၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးမင်းအိမ်(အလယ်)၊ အတွင်းရေးမှူး ၂ ဦးနွေဦး
အခြားသတင်းရပ်များက ယနေ့ မနက် ၆း၃၀ နာရီ တွင် ဦးမင်းအိမ် အဖေါ်တယောက် နှင့် အိမ်ရှေ့တွင်လမ်းလျှောက် နေစဉ် သေနတ်သမားက ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်သွားသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ဦးမင်းအိမ် သတ်ဖြတ်ခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူ့လက်ချက်ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို မိုင်းလားအာဏာပိုင် စုံစမ်းဖေါ်ထုတ် ဆဲဖြစ်သည်။
Military Inside Situations
အင်္ဂါနေ့၊ 19 ဇန်န၀ါရီ 2010 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
လက်နက်ကိုင် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ကျူးလွန်ထားသော ပြစ်မှုများကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ စုဆောင်းလျှက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ကျူးလွန်သည့် ပြစ်ချက်များ အမြန်စုံစမ်း တင်ပြနိုင်ရန်အတွက် စုဆောင်းနေရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သျှမ်းပြည် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အမည်မဖေါ်လိုသူ ၀န်ထမ်း တစ်ဦး က သျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ ပြောသည်။
မြန်မာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့များထံ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ စုဆောင်းရေး နှင့် ပတ်သက်၍ ဇန်န၀ါရီလပိုင်းကမှ ညွန်ကြားရာတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့များအတွက် သီးသန့် ညွန် ကြားထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လတ်တလော နအဖ၏ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့အသွင်ပြောင်းရေး ငြင်းဆိုနေသည့် လက်နက်ကိုင်ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ များမှာ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSP ၊ ၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSA ၊ အပစ်ရပ် SSA ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ် တပ်မတော် NDAA မိုင်းလား တပ်ဖွဲ့ စသည့် အဖွဲ့ များဖြစ်သည်။
အဆိုပါအဖွဲ့များ အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲခဲ့စဉ်က တရားဥပဒေဘောင်အတွင်း ၀င်ရောက်လာသည့် အဖွဲ့အစည်းများ အဖြစ် နအဖ သုံးနှုန်းခေါ်ဝေါ်ခဲ့သော်လည်း သျှမ်းပြည်တပ်မတော်(အပစ်ရပ်) ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲန့် ကို နိုင်ငံရေးစွဲချက်များဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၁၀၆ နှစ် အထိ ပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့သည်။
အကဲခတ်များအဖို့ ယခုကိစ္စအား နအဖမှ ဥပဒေ လမ်းကြောင်းမှတဆင့် အဆိုပါ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့များ အတွင်းစည်းပိုင်းကို ခြယ်လှယ် ချုပ်ကိုင်နိူင်ရန် အားထုတ်မှု တစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်နေကြသည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ 20 ဇန်န၀ါရီ 2010 သျှမ်းသံတော်ဆင
၁၀ ကြိမ်မြောက်ညီလာခံ ၌ RCSS/SSA ခေါင်းဆောင် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်စစ် Photo: Arntai (SHAN)
သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ ၁၀ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံ၌ ‘အမျိုးသားရေးအတွက်၊ တန်းတူအခွင့်အရေး လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းသည် ခွဲထွက်ရေးသမားမဟုတ်’ ဟု သျှမ်းပြည်တပ်မတော်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်စစ်ကပြောသည်။
ညီလာခံတက်ရောက်သူ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တဦးက-“စ၀်ယွက်စစ်ဆိုလိုတာက ‘မိမိပြည်ထောင်/လူမျိုးလွတ်လပ်ပြီး တန်းတူ အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ရရှိမှ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာ’ - သီးခြားစီ အရင်လွတ်လပ်ဖို့က အရေးကြီးတယ်၊ မျှတတန်းတူ လွတ်လပ်မှုရှိမှ ပူးပေါင်းနိုင်တယ်။ အခြားမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ၊ အထူး သဖြင့် ခွဲထွက်မှုကိုအားမပေးတဲ့ တရုတ်ပြည်လိုအင်အားကြီးနိုင်ငံက ပိုမိုနားလည်လာစေဖို့ဖြစ်တယ်” - ဟု ဆို၏။
ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက်မှ ၁၈ ရက်နေ့အထိ ၄ ရက်ကြာကျင်းပသည့် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စ္မီဃှ ၁၀ ကြိမ် မြောက် ညီလာခံတက်ရောက်သူ ၂၈၆ ယောက်ရှိပြီး - ဌာနဆိုင်ရာများ၏ နှစ်ချုပ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ တင်ပြ ဆွေးနွေး သုံးသပ်ခြင်း၊ တာဝန်အသစ်ခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးခြင်းတို့ြုပလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အတူ အရည်အချင်းနှင့် လူသူ လက်နက် အင်အားအရ ဗိုလ်မှူးကြီးယွက်စစ်အားလည်း ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာထူးအဆင့် တိုးမြှင့်အပ်နှင်းခဲ့သည်ဟု သိရပါ သည်။
အရည်အချင်း နှင့် လူသူလက်နက်အင်အားအရ ရာထူးတိုးဖို့ရန် အချိန်တန်ပြီဖြစ်ကြောင်း လွန်ခဲ့သည့် ၄ နှစ်မှစ၍ နှစ်ပတ် လည် အစည်းအဝေးတိုင်းတင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသော်လည်း ဗိုလ်မှူးကြီးယွက်စစ်က လက်မခံကြောင်း၊ ယခုအစည်းအဝေး မှသာရှောင်လွဲမရဘဲ လက်ခံလိုက်ရကြောင်း ညီလာခံတက်ရောက်သူတဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ပြောပါသည်။
“ဒု ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ် စိုင်းယီက ‘ခွန်ဆာဦးဆောင်တဲ့ MTA ပြိုကွဲသွားပြီးနောက်ပိုင်း တစုတစည်းထဲ ပြန်ဖြစ်လာအောင် ဥက္ကဌကြီး စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ အခုထိုင်းနယ်စပ်မှာ ဗဟိုဌာနချုပ်ပြန်စိုက်နိုင်တဲ့ အစွမ်းအစကလဲ မလွယ်ဘူး၊ အဲဒါကြောင့် ဥက္ကဌ ရာထူးပြန်ရွေးရင် စ၀်ယွက်စစ်ကိုဘဲမဲပေးကြပါ’ လို့တောင်ကြိုတင်တိုက်တွန်းတယ်” - ဟု ညီလာခံသွားတက်သူ ချင်းမိုင်မှ သျှမ်းလူငယ်တဦး ကပြောပါသည်။
ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက်နေ့တွင် သက်တမ်းစေ့ ဥက္ကဌနေရာအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ဥက္ကသစ်ပြန်လည် ရွေးကောက်ရာ မဲပေးသူ ၂၄၃ ယောက် အနက် ၂၁၈ မဲက စ၀်ယွက်စစ်ကိုပင် မဲပေးသဖြင့် RCSS ၏ ၄ နှစ်သက်တမ်းဥက္ကဌသစ်တာဝန် ဆက်ယူသွား ရမည်ဖြစ်သည်။
သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ ရာထူးကို ဒီမိုကရေစီနည်းဖြင့် ၄ နှစ် တကြိမ် (ယခင် ၂ နှစ် တကြိမ်) အသစ်တဖန်ပြန်လည်ရွေးချယ်တင်မြောက်ကြောင်း၊ ယခုညီလာခံတွင် အခြားပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူ ၉ ဦးအား ပေးသည့်မဲ က ၂၅ မဲ ဖြစ်ကြောင်း - သိရ၏။
အသစ်တဖန်ပြန်လည် အရွေးခံသည့် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များမှာ - ဥက္ကဌ ဒု - ဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်စစ်၊ ဒု ဥက္ကဌ - ၁ ဗိုလ်ချုပ်စိုင်းယီ၊ ဒု ဥက္ကဌ - ၂ ဗိုလ်မှူးကြီးခေးငင်း၊ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒု ဗိုလ်မှူးကြီးဆီရိ တို့ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ အရာရှိငယ် ၁၅၃ ဦးအားလည်း ၁၀ ကြိမ်မြောက်ညီလာခံမှ စစ်ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။
Washington (CNN) -- Former President Bill Clinton will travel to Haiti on Monday to meet with officials and deliver aid supplies to the quake-ravaged country, his foundation announced Sunday.
သတင်း သတင်း။ News,ု
NDF Call on Military Troops
P.O. Box – (101), Mae sod, Tak. 63110, Tel / Fax (+ 66) 55 536 757, Email: ndfburma@hotmail.com. Blog: ndf-burma.bolgspot.com
Armhwyfrawmfom;rsm; rdbjynfolrsm;buf &yfwnf&ef trsKd;om;'Drdkua&pDwyfaygif;pk - r'w . yef=um;v$m
'%ftrsKd;rsKd;udk cg;oD;pGmcHae=u&ygonf? ppftm%m&Sifrsm;zefwD;aom qdk;&Gm;onfh ab;'kuQ'%fudk wyfrawmfom; tm;vHk;
+yD;/ wyfr (77) ESifh wyfr (66) vufatmufcH wyf&if;rsm;.tajctaerSefudk azmfxkwfcJh=uonf? xdk jzpf&yfrsm;onf wyfwGif;wGif trSefwu,f}uHKawG@ae&aom pm;0wfaea&; 'kuQtcuftcJjy\_emrsm; jzpf+yD; jynfolvlxkwdk@. tcuftcJ tusyftwnf;udk wyfrawmfudk,fpm;jyKI azmfjyvdkufjcif;yifjzpfonf? Atmufajcwyfrsm;. 'kuQtcuftcJrsm;udk enf;rSef vrf;rSef ajz&Sif;&ef etz ppftkyfpkwGif tpDtrHtwdtusr&SdyJ trdef@tm%mjzifh xdef;csKyfzdESdyfxm;onfudk awG@jrifae&ygonf? wdkif;jynf. tusyftwnf; &dkufcwfr_rsm;a=umifh ,ae@umvwGif wyfwGif;oabmxm;uJGvJGr_rsm;/ trdef@tm%mzDqefr_rsm; qufwdkufqdkovdk ay:xGuf vmjcif;jzpfonf[k rdrdwdk@ r'w wyfaygif;pkrS &_jrifoHk;oyfrdygonf?
jynfcspfwyfrawmfom;rsm; jynfolvlxkbuf &J&J0Hh0Hh&yfwnf&ef ESifh rdbjynfolwdk@. &ifcGifodk@jyefvnf cdkvH_0ifa&mufvmrnf wdkif;cspfjynfcspfArmhwyfrawmfom;aumif;rsm;. rSefuefaomvkyf&yfudk tpOfaxmufcHa=umif; trsKd;om;'Drdkua&pD wyfaygif;pk
- r'w taejzifh tav;teuf wdkufwGef;yef=um;vdkufygonf?
trsKd;om;'Drkdua&pDwyfaygif;pk - r'w